IMIHLAHLANDLELA YAMALUNGU | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Home Explore IMIHLAHLANDLELA YAMALUNGU
Wamukelekile Ezichazamazwini zakwa-Oxford, indawo lapho ufaka khona isandla ekwakhiweni kwezinsiza zolimi ezidijithali, wabelane ngezimvo nangemibono nalabo abathanda ulimi njengawe, bese uthola izimpendulo emibuzweni yakho.
Sikukhuthaza ukuthi ufake amagama amasha nezihumusho ukwakha isichazamazwi. Ungabuza imibuzo ngamagama nezihumusho, futhi uphendule nemibuzo ethunyelwe. Ungaxoxa ngezimvo zakho ngolimi namagama, futhi ubuze imibono yabanye. Umphathi Wolimi ngumphathi womphakathi nomuntu othintana naye. Ukhona ukuze eseke ukuthuthukiswa kwezinsiza nokuqinisekisa ukuthi onke amagama afakiwe nokuphawula kuhambisana nemihlahlandlela okwenatshwe kuyo lapha. Ucelwa uqaphele ukuthi Umphathi Wolimi ngeke akwazi ukuphendula imibuzo mayelana nemibhalo esesichazamazwini nezinsiza okutholakala esayithi Yezichazamazwini zakwa-Oxford isiyonke. Uma unombuzo mayelana nomkhiqizo noma ngokufaka isandla Ezichazamazwi zakwa-Oxford, noma umbuzo ngelilodwa lamagama asesichazamazwini, uyacelwa ukuthi uvakashele Ikhasi losiso (ucelwa ukuthi uqaphele lokhu: umbhalo ungesiNgisi).
Ngokusebenzisa le website ethi oxforddictionaries.com (i-Website) uyavumelana nokuhambisana nale Mihlahlandlela, kanye neNqubomgomo Yengasese Nesaziso Somthetho echaza imigomo yokuvikeleka kwemininingwane eyejwayelekile, amalungelo e-Oxford University Press okusebenzisa noma yimuphi umbhalo oqhamuke nomsebenzisi kanye nokusetshenziswa kwesayithi ngendlela enobuqiniso. Uma udinga lombhalo ngolunye ulimi, ucelwa ukuthi usithinte.
Semukela noma yiliphi igalelo kuzo zonke izikhulumi. Le ndlela elandelayo yokuziphatha ngeke ize yamukeleke kunoma yiluphi uhlobo lokuthumela, ukuphawula, noma ukufaka igama nesihumusho kwi-Website:
Noma iyiphi indlela yokuziphatha ebhekiswe kwamanye amalungu noma izivakashi kwi-Website (nezingxenye zayo) engabonakala njengokuhlasela noma ukuhlukumeza
Ukusebenzisa ulimi olukhombisa ukuba luhlaza noma olunokwedelela (ngaphandle uma lusetshenziswa engxoxweni ephathelene nokufunda).
Noma yini ethunyelwa ngenhloso yokuthengisa, ukukhangisa, ukuqhakambisa, noma ukuthengisa umkhiqizo nemisebenzi ethile (ngaphandle uma kuyisincomo esicelwe elinye ilungu).
Ukususa uthuthuva (“ukuthumela izinto ezinokwedelela ngabomu noma ezinothuthuva ngenhloso yokucasula umuntu othile noma ufune ukuthi aphendule ngentukuthelo”).
Izihloko ezingahambisani nolimi namagama.
Imibhalo engekho emthethweni, esongayo, ephatha kabi abanye, engahloniphi ukholo, ethunazayo, ekhombisa ukuba luhlaza, eyenyanyisayo, ehlazayo, ekhohlisayo, eyinkohlakalo, enemiboniso esobala yezenzo zocansi (kubandakanya kodwa kungagcini olimini locansi lohlobo lwesihluku noma lokusongela oluqondiswe komunye umuntu noma kwabanye abantu), ukungena izindaba zomuntu zangasese noma inzondo.
Imibhalo eyenza noma ekhuthaza ukuziphatha okunobugebengu noma eyenza ukuthi kusetshenziswe umthetho okuholela ekujezisweni.
Imibhalo enohlelo olulimaza ikhompyutha, uhlelo lwekhompyutha oluqoqa ulwazi lomunye umuntu noma inhlangano ngaphandle kolwazi lwabo, noma ezinye izingxenye eziyingozi, ukukhangisa kwanoma luhlobo luni, noma izinkomba ezingelona iqiniso noma ezedukisayo zalokho okwenzeka ngempela.
Ulwazi olungelona iqiniso noma olwedukisayo lwangabomu.
Imibhalo evikelwe ilungelo lokushicilela, noma elinye ilungelo lobunikazi noma lokuqamba okuthile.
Noma yiluphi ulwazi olubucayi, olubhekene nomuntu othile kuphela, olobunikazi noma olobumfihlo olumayelana nawe noma nabanye ekuphawuleni kwakho.
Ukubuyekeza kokuqinisekisaizinga elemukelekile
Sigodle ilungelo lokubheka konke okuthunyelwe kwi-Website kwanoma luhlobo luni okuphambene nale mihlahlandlela; ngaleyo ndlela, okunye okuthunyelwe singakuthumela kuyobuyekezelwa ukuqinisekisa izinga elemukelekile ngaphambi kokuthi kushicilelwe kwi-Website.
Sigodle ilungelo lokuvimba noma yimuphi umsebenzisi ngaphandle kwesexwayiso noma kokuxoxisana ongahambisani nale mihlahlandlela, bese sisusa konke akuthemele namagama noma izihumusho azifakile.
Sicela ukuthi ungasho okungeyikho encazewleni yakho emfushane. Kuyinqubomgomo Yezichazamazwi zakwa-Oxford ukuthi malungu axhumane esebenzisa amagama awo angempela, ukwenzela ukuphendula kokwenzekayo nokwenza izinto ngokusobala.
Umbhalo othunyelwe ngabasebenzisi uyoqale uvele ‘njengalokho okufakwe umsebenzisi’, bese kuqinisekiswa abanye abasebenzisi Bezichazamazwi zakwa-Oxford noma ngaphakathi u-OUP.